रक्त’दान जीवन दा’न ; कसले गर्न मिल्छ र कसले मि’ल्दैन? – Sadhaiko Khabar
रक्त’दान जीवन दा’न ; कसले गर्न मिल्छ र कसले मि’ल्दैन?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ ०३, २०७८ समय: ७:१३:४१
डा. आयशा श्रेष्ठ /
विश्व र’गत दाता दिवस हरेक वर्ष जून १४ मा पर्दछ । र’क्तदान एउटा यस्तो कार्य हो जसले विश्वव्यापी रूपमा लाखौंलाई बचाउँछ । किनभने र’गत मानव जीवनको अत्यावश्यक तत्व हो । सन् २०२१ को लागि विश्व र’क्तदाता दिवसको नारा “रग’त दिनुहोस् र विश्वलाई जिवन्त राख्नुहोस्” रहेको छ ।
यस सन्देशले र’गत दाताहरूले अरुको जी’वन बचा’उनुका साथै स्वा’स्थ्यमा सुधार ल्याउनका लागि पुर्‍याउने भूमिकालाई ध्यानाकर्षण गर्दछ । यसले विश्वभरिका व्यक्तिहरुलाई नियमित रूपमा र’क्तदान गर्न र स्वा’स्थ्यमा योगदान पुर्‍याउन आह्वानलाई गर्दछ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमान गरे अनुसार कुनै पनि राष्ट्रको रग’तको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि न्यूनतम कुल जनसंख्याको १ प्रतिशतले रक्त’दान गर्नुपर्छ । यसको उद्देश्य भनेको रक्तप्रक्षे’पणका लागि सुरक्षित रग’त र रग’त उत्पादनहरूको आवश्यकताको विश्वव्यापी जागरूकता र महत्वपूर्ण योगदान स्वैच्छिक रक्त’दान गर्ने दा’ताहरू बढाउनु हो । प्रत्येक केहि सेकेन्डमा कसैलाई र’गत चाहिन्छ ।
रग’तको आवश्यकता सधैं रहिरहन्छ । र’गत दान गर्न सक्ने प्रत्येक व्यक्तिले नियमित स्वैच्छिक रक्तदा’न गर्नुपर्छ जसले गर्दा देशमा पर्याप्त र:क्त आपूर्ति हुन्छ । सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई सुनिश्चित गर्नुका लागि र’क्तदान महत्वपूर्ण छ, यसले नियमित अनुदानको लागि प्रतिबद्धता निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ । शरीरको कुल रग’तको ३० प्रतिशतभन्दा बढी र’क्तस्राव घा’तक हुनसक्छ। जसको लागि तपाईंले गरेको र’क्तदानले उक्त व्यक्तिको जी’वन बचा’उन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
कसलाई र’गत चाहिन्छ ?
चो’टपटक लागेका बि’रामीहरू, दु’र्घटनामा परेका व्यक्ति, आपत’कालिन र प्रको’पमा परेका व्यक्तिहरु, गम्भीर रक्तअल्प’ताका बच्चाहरूका साथै वयस्कहरू, रक्तस्रा’वसँग सम्बन्धित रो’ग वा सम’स्या भएका, श’ल्य प्रक्रियामा रहेका बिरामीहरू, गम्भीर रक्तअ’ल्पता भएका गर्भवती महिलाहरू ।
कसले रग’त दान गर्न सक्छ?
उमेर १८ देखि ६० बर्षसम्म पुगेका र ४५ किलोग्राम भन्दा बढी तौल भएका व्यक्तिहरु । यसका साथै सबै शारीरिक र हेमाटोलोजिकल मापदण्ड पूरा भएको र शरिरमा र’क्त न्यू’नतम ३५० मिलीलिटर भएका सबैले र’क्तदान गर्न सक्दछ । रक्तदा’नको समयमा मानिसहरू राम्रो स्वा’स्थ्यमा हुनुपर्दछ ।
कसले रग’त दान गर्न सक्दैन?
चिसो, फ्लू, घाँटी दु’खाइ, पेट सं’क्रमण भएका वा कुनै ग’म्भीर रो’ग लागेका व्यक्तिहरूले गर्न मिल्दैन । ट्याटू वा शरीर छे’ड्ने व्यक्तिहरूले भर्खर प्रक्रियाको दिनदेखि ६ महिनासम्म रग’त दान दिन सक्दैनन् । सानो प्रक्रियामा दन्त चिकि’त्सकको भ्रमण गर्ने व्यक्तिले दान दिनु अघि २४ घण्टा कु’र्नु पर्छ ।
१३ ग्राम प्रति डिसीलीटर एल भन्दा कम एच बि भएका पुरुष र १२ ग्राम प्रति डिसीलीटर एल भन्दा कम एच बि भएका महिलाले र’क्तदान गर्न सक्दैनन् ।
एच’आईभी संक्रमि’त व्यक्ति र रिक्रिए’शनल औष’धिहरुको प्रयोग गर्ने व्यक्तिले रक्तदा’न गर्न सक्दैनन् ।
गर्भ’वती महिला र स्तनपान गर्ने महिलालाई बच्चा जन्माए पछि ९ महिनासम्म रक्त’दान गर्न अनुमति छैन ।
लामखुट्टेले फैलाउने संक्र’मण भएका स्थानीय रूपमा हुने मलेरि’या, डें’गू, जी’का जस्ता संक्र’मण भएका ठाउँका मानिसहरुले केहि समय रग’त दान गर्नु हुँदैन।
र’गत दान गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले रग’त दिनु अघि साधारण शारीरिक परी’क्षण र र’गत परी’क्षण पूरा गर्नुपर्छ । व्यक्तिको रक्त’चाप, शरीरको तापक्रम, मु’टुको दर, हे’मोग्लोबिन वा आ’इरनको स्तर सामान्य सीमा भित्र हुनुपर्दछ ।